Ahi-kokomboloko marevaka mihintsana: salantsalany amin'ny tavoahangy misy sary sy lahatsary - Zavamaniry mihinana - 2019
Recipe for cucumbers crunchy salady ao an-trano (anaty siny)
Tonga ny fahavaratra ary misy faniriana hihinana cucumbers - ary tsy hoe vao maina, fa ny sira. Betsaka ny fomba fikarakarana mba hanamboarana izany. Ireto ambany ireto ny iray amin'izy ireo: tsotra sy haingana.
Greens, tongolo gasy, dipoavatra
Mampiditra cucumbers ao anaty siny
Fitaovana ilaina sy fitaovana ilaina
Ho an'ity fomba fitehirizana mahavoky ny kôkômbinina ity, tsy ilaina ny teknolojia maoderina, ny sakafo mahasalama dia omena amin'ny teknika manokana sy fitaovana tsotra. Ny fitaovana rehetra ao amin'ny lakozia dia tsy afaka manao afa-tsy tsy misy vata fampangatsiahana, izay ilaina amin'ny fitehirizana.
Kitapo misy menaka 3 litatra, izay misy kôkômbra, ny cover capron ary ny gaze dia napkin-doko marin-tampona hapetraka mba handrakotra ilay siny;
2 litatra siramamy na sotro rongony iray hafa ary sotro iray fanosotra sira;
ny antsy sy ny solaitrabe mba hanapahana legioma sy zavamaniry.
Ho an'ny voankazo masira voamadinika ao amin'ny fanandramana, mila mitondra ireto vokatra manaraka ireto ianao:
ho an'ny siramamy: 2 litatra ny rano mafana ary 2 lava-be mitafo sira;
ranomandry (ny zavamaniry manontolo miaraka amin'ny ravina sy ny fakany, izay hahatonga ny fanandramana ho feno sira);
1 tongolo lay;
1 pod of hot pepper hot (afaka maina);
1 dill of dill with bloom;
Volom-borona ravinala mainty sy serizy;
Tontolon'ny skiritsa misy ravina: hanome siramamy tsy manam-paharoa sy crunch izy io.
Fantatrao ve? Schiritsa, na amaranth, dia tsy fotaka fotsiny. Hitanao fa ity dia zavamaniry manan-danja iray izay mety ho ampiasaina amin'ny fametavazana cucumbers. Ny lafarina dia azo avy amin'ny voa, izay sarobidy kokoa noho ny vary amin'ny fiterahana.. Ho an'ny Aztec tranainy sy Inca, dia vokatra voajanahary sarobidy izany, izay nitombo tamin'ny katsaka, ny tsaramaso sy ny ovy.
Ny vokatra fototra dia kôkômbra. Raha novidina teny an-tsena ry zareo, dia midika izany fa efa nihemotra fotoana elaela izy ireo ary mety ho kely ihany. Mba hamerenana azy ireny dia mila rano mangatsiaka mandritra ny 2-3 ora izy ireo. Ireo mpivarotra efa za-draharaha dia mamporisika ny fanosehana tsy ny tsena fotsiny ihany, fa ny azy manokana ihany koa, dia mamoaka komandy fotsiny mba tsy hipoitra ao anaty.
Ao amin'ny tsena, mazava ho azy, mila mifidy kôkombra mitovy habe ianao, iray-on-iray. Samy nanondraka ny sombin-tsolika lehibe ny ankamaroany na ny bitika kely, izay napetraka ao anaty siny amin'ny sehatra samihafa.
Ny tongolo lay dia hifanaraka amin'ny tanora sy ny taona farany.
Ny ravinkazo sy ny kiriodrialy dia manome siramamy misy tsiro sy menaka miavaka. Tsara ny maka ravina vaovao, fa ny maina kosa dia tsy maintsy atao.
Fantatrao ve? Ny ravinkazo dia manana voninkazo izay manampy ny cucumbers tsy ho menatra. Ankoatr'izany, dia misy ny fanjifa mahery ry zareo ka mamono E. coli mihitsy aza. Ny fatran'ny bakterizidran'ny raviny dia mitahiry maharitra ny legioma.
Ity tsotra ity dia tsotra. Saingy misy tricks sasany izay tsy hita amin'ny fomba hafa.
Ao anaty rano milomano 2 mila mila misotro sotro ianao. Mba hahazoana siramamy sira amin'ny fofona maotina dia zava-dehibe ny manara-maso ny habetsahan'ny sira hametraka rano litatra. Ny mahazatra: 1 litatra ny siramamy sira. Ny kôkômbra 3 litatra dia hanana 1.5 litatra na mihoatra. Tsara kokoa ny mahandro miaraka amin'ny marika - 2 litatra. Ny hafanan'ny rano dia miankina amin'ny fomba hikorianana kely. Raha mangatsiaka ny jiro, dia haharitra ela ny kôkômbra, raha milamina dia haingana kokoa izany.
Zava-dehibe izany! Tsy tokony hidina ny rano mafana, toy ny amin'ny elanelana avo lenta, ny legioma sy ny zavamaniry dia very ny toetra mahasoa azy ireo..
Amin'ny ankapobeny, noho ny fanangona cucumbers haingana dia haingana, ny voly dia voadona ka manolotra haingana ny tsirony.
Ny ravin'ny ravina dia atambatra miaraka amin'ny tongotra sy ny fakany amin'ny ampahany kely.
Miorina koa ny ravinkazo sy ny ravina.
Ny fanilo sy ny shchiritsy tsy notapahina, ary nokasihina.
Tokony hozaraina tsiranoka ny tongolo lay, ary hesoniny ny rantsantanana tsirairay. Raha kely dia kely ny tongolo lay, dia alao ny lohany, ary sasao ny kibony, ary sasao ny kibony.
Ny pendri-pokontany dia manapaka amin'ny peratra, fa tsy miala amin'ny voa. Raha maina ny dipoavatra, dia mety haparitaka amin'ny hety izany. Ho an'ny gidro ho matsiro maingoka, 3/4 dia ampy. Ho an'ny fahasimbana bebe kokoa dia azonao atao ny mametraka ilay dipoavatra manontolo.
Zava-dehibe izany! Raha misy cucumbers saka nohanin'ny zaza na olona manana vavony mafy, dia tsara kokoa ny miala amin'ny dipoavatra.
Ao amin'ny faritry ny siny dia misy dill iray feno dill miaraka amin'ny elo sy shiritsu, ary ny ampahatelon'ny voamaina sy ny zava-manitra.
Ampitahao ny antsasany ny kôkômbra. Raha toa ka mitovy habe ny legioma, dia tsara kokoa ny mamelatra ny tara-piaramanidina kokoa. Mba hahazoana voanio saline haingana, dia azonao ampiasaina kely ny tricks: esory ny sisiny ary, raha tianao, dia manaisotra ny kôkômbra ao afovoany miaraka amin'ny antsy.
Avy eo dia manondraka ny ampahatelon'ny volomparasy, tongolo lay sy dipoavatra.
Ambony kokoa ny kôkômba misy stokooma.
Aparitaho ireo zava-manitra sisa tavela.
Raha feno legioma ny siny, dia tsy maintsy nilentika tao anaty rano ny sira. Alohan'ny hanidinana ny sira, dia mila mahazo antoka fa ny hafanana mety: tsy mangatsiaka sady tsy mafana, fa mafana. Angamba tokony ho maina na hafanana izy io. Ilaina ny mameno ny rano mba hikarakarana ny kôkômbra rehetra.
Misy tavy feno iray mikatona mafy amin'ny fonon-tsela nilo ary mihetsiketsika tsara.
Avy eo dia esorina ilay ravina ary amin'ny fotoana mahavariana dia rakotra lamba marin-tanana maromaro.
Ny tavoahangy dia napetraka eo ambonin'ny latabatra ka rehefa mitsangana ny fo dia tsy mandevona ny latabatra izy, fa mijanona ao anaty takelaka.
Ho an'ity fantsom-bokatra ity dia misy karazana kôkôma sahala amin'ny: "Taganay", "kavina Emerald", "Lohataona" ary "Kolonely Real".
Ny kôkômbinina voangom-bolo sy ny kaopy matevina dia tavela ao amin'ny efitrano mandra-pahafatiny. Raha vita ny fiomanana amin'ny maraina, dia azonao atao ny manandrana ny kikumbika kely amin'ny hariva. Tokony ho cucumbers tena mamy sy mamy izy io. Ny kôkômbinina voapetaka dia tokony hosaronana amin'ny plastika plastika ary nodiovina mba hampihenana ny dipoavatra ary mba tsy ho lasa ny legioma. Ilaina ny mandinika fa ny salohim-bary lava dia lava kokoa, lasa salama kokoa izy ireo. Ny kôkômbra voaaro araka io fomba io dia tena matsiro ary tena bitika tokoa. Safidy lehibe ho an'ny fomba haingana ny famonoana kôkômbinina voavoly ao an-trano.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Recipe for cucumbers crunchy salady ao an-trano (anaty siny)